What do I do if my child is sick and I’m not sure if it’s COVID-19: Ukubonakalisa izimpawu zokugula – Messages for Mothers
Ngenzenjani uma ingane yami igula kakhulu futhi ngingaqiniseki ukuthi yi-COVID-19?
Ungase ukhathazeke ngengane yakho uma ibonakala igula kakhulu kunomkhuhlane noma imfuluwenza ejwayelekile. Mhlawumbe ayidli, iphefumula ngokushesha, ayinamandla, ayifuni ukudlala, ishisa kakhulu, inesifo sohudo esiqhubekayo. Mhlawumbe inokuqubuka, amamaki ezandleni nasezinyaweni noma ulimi nomlomo obomvu. Noma ibe nolunye uphawu lwengozi lokugula (bheka Incwadi Yomgwaqo eya Empilweni yengane yakho). Uma kunjalo, ingane yakho kufanele iyiswe emtholampilo noma kudokotela noma esibhedlela, ngumuntu omdala ongenayo i-COVID -19, uma kungenzeka. Tshela udokotela noma abasebenza emtholampilo ukuthi ngabe kukhona yini ekhaya ophethwe yi-COVID-19.
← Sanitisers and disinfectants at home: Ukusetshenziswa kwama-sanitiser nokubulala amagciwane ekhaya → How do I tell my child that I, or someone close to them has COVID-19: Ukunakekela izingane uma umzali ene-COVID-19